Daryeelka xarun guud - Geofumadas
Waxaan ku dhowaan diyaar u nahay in aan bilowno marxaladda qaadista, waxaan horeyba u siinnay tababarka ugu horeeya ee loogu talagalay hawlwadeenada hadda aan hubinno in kooxdu leedahay nolol caafimaad leh. Dhammaadka qalabka habka loogu deeqi doonaa hay'ad in abuuri doonaa, oo u adeegi doonaa dhowr degmo si wadajir ah, si layliga ma ay diiradda saaraan u qaadaya laakiin habaynta nidaamka. Waxaan u dirayaa boostadan si aan uga hadlo daryeelka aasaasiga ah ee ku yaala saldhigga guud.
Ha u isticmaalin qalabka aagagga meelaha ay ka muuqato qadaro badan oo boodh iyo ash.
Si aad uga hortagto bateriga laga bilaabo gaaban, inta lagu kaydiyo, ku rid shaashadda ama wax la mid ah terminaalka.
Ka hor inta aan la xirin jumlada shandadaha in gudaha ay qalalan tahay sida qalab isku mid ah, haddii kale waxay ka heli kartaa caaryada.
Weligaa si toos ah SET ha gelin dhulka. Sand ama boodhku waxay dhaawici karaan godadka furaha ama xarigga dhexe ee saldhigga.
Ha u jeedin in taleefishinka qorraxda la dhigo, waxay dhaawici kartaa qalabka gudaha.
Marka aan la isticmaalin qalabka waa in lagu daboolaa daboolka vinyl.
Marna ha u qaadin SET on tripod.
Demi qalabka ka hor intaadan ka saarin batteriga.
Markaad SET dhigto shandadaada si aad u kaydiso wax ka badan hal maalin, ka saar batteri marka hore.
Ku saabsan dayactirada joogtada ah:
Si joogto ah u hubi in aysan jirin wax qashin ah oo qoyaan ama boodh ah oo la xiriiraya gudaha gudaha daboolka bateriga, terminaalka ama xirayaasha.
Had iyo jeer nadiifi qalabka ka hor intaad ku kaydin boorsada. Marka ugu horeysa nadiifinta muraayada burushkaada si aad u qaaddo boodhka, ka dibna u gogol yar yar adigoo isticmaalaya muraayada, ku tirtir maro jilicsan.
Ha isticmaalin dareerayaasha dabiiciga ah si aad u nadiifiso shaashadda, kumbuyuutarka ama boorsada.
Haddii qalabku waqti badan ku qaato wakhti aan shaqaynin, samee dayactir ugu yaraan bil kasta 3.
Shandadda waa in had iyo jeer la xiro inkastoo ay madhan tahay si looga fogaado qoyaanka.
Ku saabsan ammaanka
Ogolow caymiska ilaaliya maalgashigaaga, waxa habboon in la daboolo xatooyada iyo dhaawaca shilalka.
Ha ka tagin qalabka oo keliya, adigoo doorbidaya farsamayaqaan si uu u noqdo ilaaliye iyo, haddii ay suurtagal tahay, heleyso adeegyo ammaan.
Ha ku dhaqin qalabka gaadiidka dadweynaha.
Ka fogow kaydinta qalabka iyo qalabka hudheelada ama goobo aan hubin masuuliyadaada.
Daboolistu ma aha mid isku dhafan oo wanaagsan oo la xidhiidha prism 😉
Waxa aan ka walaacsanaa ku saabsan caymiska, laakiin waxaan maamula hal sano oo kaliya $ 130 ii daboolaya xatooyo, shilalka gaadiidka, masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa kale.
Post Previous«Previous Fiidiyeyaasha si ay u bartaan AutoCAD, bilaash!
Post Next Talo-siinta isticmaalka saldhigga guud ee CadastreNext »
9 Jawaab ah "Daryeelka Xarunta Guud"
Waa inaad doorbidaa inaad isticmaasho qalab khaas ah oo warshadeed, oo ay u isticmaalaan nadiifinta qalabka korantada; taasi ma tirtireyso lambaradaada mana dhaawaceyso rinjigaaga.
Nicolas Funes isagu wuxuu leeyahay:
hello galab wanaagsan, sideen uga saari karaa rinjiga xaruntayda guud ee 'Leica', buufis yar ayaa hoos u dhacay mana aqaano waxa loo isticmaalo in meesha looga saaro wasakhdaas.
Anigu si khalad ah ayaan u jiiday batteriyanka meeshiisa oo dhan inta uu ku sugnaa ... hadda ma jeedo ... hadi ay dhici laheyd ... qaar ka mid ah gaaban gaaban
saldhigayga guud FX-103 kuma soo laabanayo .. wuxuu ka tagaa dhowr saacadood iyada oo aan lahayn batari hadda ma jeedo
MARKA HADDII AAN HOOS KA DHAGEYSO MADAXWEYNE OO AY KU JIRTAAN MADAXWEYNE Biyo AAN MA HADLAN KARO in Xaruntu Wanaagsantahay MARKA AAN QABO MARKAAMADA IYO HADAAN KA BARAN
JOSE RICARDO DE LIMA SANTOS isagu wuxuu leeyahay:
Muujin ficil dazendo barulho oo mar walba medindo, ai bateria não dura muito, tenho sida loo farsameeyo pra não acontecer isso ??
Orlando Casazola Suarez isagu wuxuu leeyahay:
Sidee qoyaan looga hortegi karaa inay saameyn ku yeeshaan rinjiga ama sida looga hortago ku-meelaynta rinjiga inuu ku sii socdo bakhtiga fadlan ma i hagi kartaa
Lani Tidwell isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan raadinayay arrintan gaarka ah adoo isticmaalaya weydiinta markaan ku soo gaadhay boggaaga. Waxaad haysaa maadooyin badan oo adag. Shaki kuma jiro mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
ing. efren-aadanku isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sida looga saaro fungus kaas oo ka samaysan muraayadaha gudaha. Bilihii ugu dambeeyay waxaan kireeyay kirada canshuurta waxayna ii dhiibeen sidan. Waxaan jeclaan lahaa inaad i caawisid .xalapa, Veracruz mexico